ALAROBIA 21 MARSA 2018
ANTOKO MPANOHITRA : Mitaky ny hanaovana fifidianana lalàm-panorenana mialoha ny 2018
Lalàm-panorenana no tokony hofidiana mialoha, fa tsy ny Filoham-pirenena amin’ny taona 2018, hoy ny antoko mpanohitra. 11 janvier 2017
Nambaran’izy ireo ho anton’izany dia ny lalàm-panorenana no lalàna hitondrana ny tany sy ny Firenena, fa ny filoha voafidy no natao hanaja sy hampihatra izany.
Amin’ny antoko mpanohitra izany dia ny lalàna aloha no tokony hofidiana mialoha sady fototra iaingan’ny fampandrosoana. Aorian’ny fifidianana ny lalàm-panorenana vao miroso amin’ny fifidianana Filoham-pirenena, ny Solombavambahoaka, ny Faritra, ny Kaominina sy ny Fokontany sy ny sisa. Nambaran’ny antoko mpanohitra ihany koa fa raha mbola izao fitondran-dRajaonarimampianina izao no mbola hikarakara ny fifidianana eo dia tsy maintsy hisy ny halatra ao anatin’izany.
Tsy matoky izao fitondrana izao mantsy ny antoko mpanohitra satria tsy azo antenaina intsony ny amin’izy ireo. Eo ny fivarotana ny tanindrazana, ny fanaovana barofo ny harem-pirenena, ny tsy fijerena ny sosialim-bahoaka. Ankilany, tamin’ny kabary izay nataon’ny Filoha Hery Rrajaonarimampianina farany teo, talohan’ny faran’ny taona, dia nilaza izy fa nisy ny dingana na irika kely nialana tamin’ny fahantrana idirana any amin’ny fampandrosoana.
Tsikaritra anefa izany fa toa mbola manjaka izay fahantrana izany hatramin’ny anio. Tsy misy vahaolana, fa vao mainka aza mikaikaika amin’ny fiakaran’ny vidim-piainana ny vahaoka tsy mandadiharona. Ny fiakaran’ny solika sy ny fahatapahan’ny herinaratra isan’andro manginy fotsiny. “Aoka tsy hampanatena poakaty ny vahoaka rehefa tsy mahita vahaolana amin’ity taona. Mialà na mametraha fialana rehefa tsy mahavita”, hoy hatrany ny mpanohitra.
Nahazo fandrahonana ny orinasa mpanamboatra lalana any Ambilobe MARARY FO NY HVM (661) 15 mars 2018 Mangataka fialan-tsiny ampahibemaso ny Holafitra FANAMBANIANA MPANAO GAZETY (369) 15 mars 2018 Tsy naharototra ny vahaoka i Hery Rajaonarimampianina FITSIDIHANA TAO AMBILOBE (322) 20 mars 2018 Ramatoa iray maty, tovovavy efatra lasa natao takalon’aina FANAFIHAN-DAHALO TAO MAHABO (303) 15 mars 2018 Saron’ny zandary ireo jiolahy nahavanon-doza FANAFIHANA MAHERY VAIKA TENY ITAOSY (232) 19 mars 2018 Miparitaka ao Toamasina, lasa fitaovam-panaparam-pahefana KARATRA « ASSISTANT PARLEMENTAIRE » (213) 19 mars 2018